पल-समीक्षा प्रकरणमा हिरोइनहरुको दुई कित्ता - Entertainment Khabar
पल-समीक्षा प्रकरणमा हिरोइनहरुको दुई कित्ता
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १९, २०७८ समय: ७:०५:५७
नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेपछि तनहुँ प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहको पक्षमा समूहगत आवाज उठिरहँदा केही सिने अभिनेत्री भने पीडितको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । रेखा थापा, ऋचा शर्मालागायतका अभिनेत्रीले पीडितको पक्षमा मुख खोलेका हुन् ।
अभिनेत्री थापाले बालिका कानुनतः सबै प्रकारको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।‘२० वर्षमुनिका छोरीहरु बालिका हुन् । बालिकाले कानुनतः सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । समाजको भूमिका उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने हो,’आज सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा रेखाले लेखेकी छन्, ‘को सँग लभ छ ? कति पटक यौन सम्पर्क भयो ? यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानुनलाई मतलव हुनुहुँदैन । समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन । केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरि कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रुपमा नेपालमा व्याप्त छ ।’
रेखाले लेखेकी छन्,‘कोसँग लभ छ ? कति पटक यौनसम्पर्क भयो ? यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानुनलाई मतलब हुनुहुँदैन । समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन । केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरि कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रुपमा नेपालमा व्याप्त छ ।’
रेखाले नाबालिगको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएको केही घण्टापछि अर्की अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि नाबालिगको संरक्षण कानुनको सम्मान रहेको बताएकी छन् । ‘मलाई विश्वास छ नाबालिगको विश्वासको हत्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको चरित्र हत्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले । नाबालिगको संरक्षण,कानुनको सम्मान हो,’ ऋचाले लेखेकी छन् ।
रेखा र ऋचाले पीडितको पक्षमा बोलिरहँदा उता पूजा शर्मा र करिश्मा मानन्धर भने पल शाहको पक्षमा उभिएका छन् ।